स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोल्न सकिन्छ : शिक्षा मन्त्रालय – Samabeshi Khabar
स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोल्न सकिन्छ : शिक्षा मन्त्रालय
२० पुष २०७७, सोमबार १७:३७ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, पुस २० (ससं) । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संकट व्यवस्थापन केन्द्रले विद्यालय खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रको बैठकले सरकारलाई प्रतिबन्ध लागेका विद्यालय, सिनेमालगायत क्षेत्र खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गर्नेछ। कोरोना महामारीका कारण गत चैत ५ गतेदेखि विद्यालय क्षेत्र बन्द छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो छ तर जोखिम भने कम नभएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण बेलायतलगायतका विश्वका अन्य देशमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति फेला परेको छ। यो तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय क्षेत्र खोल्ने निर्णय गर्नु गलत भएको जनस्वास्थ्य विद्हरूले बताएका छन्।
विश्वका विभिन्न मूलुकसहित छिमेकी देश भारत तथा चीनमा समेत नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फेला परेको अवस्थामा यो निर्णय हतारोमा भएको उनीहरूको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले जाडो मौसममा कोरोनाको जोखिम बढी हुने बताए। जाडो मौसममा बालबालिकालाई भौतिक रूपमा विद्यालयमा पठाउँदा कोरोना भाइरसको अर्को लहर शुरू हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
“विश्वमा एकातिर नयाँ प्रजाति तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। अर्कोतिर जाडोको समय पनि आएको छ,” उनले भने, “जाडो नसकिँदासम्म विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गराउन हुँदैन। अहिले हतार नगरेकै राम्रो।”
जाडो मौसममा कोरोना भाइरस बढी सक्रिय हुने भएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
अर्का जनस्वास्थ्यविद् डा. रमेश आचार्यले विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन गराउनुभन्दा वैकल्पिक व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
“यूरोपतिर फेरी कडा लकडाउन, कर्फ्यु जारी भइरहेको छ। हाम्रा शासकहरू भने विद्यालय खोल्नतिर लागेका छन्। यो जाडोसम्म विद्यालय नखोल्दा पनि केही फरक पर्दैन। नयाँ प्रजातिले कस्तो प्रभाव पार्छ त्यही आधारमा खोल्नुपर्छ,” उनले भने।
विद्यालय सञ्चालक खुशी
सीसीएमसीको उक्त निर्णयप्रति विद्यालय सञ्चालक भने खुशी देखिएका छन्। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरू समस्यामा परेका थिए। विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पाएका थिएनन्, जसले गर्दा विद्यालय भाडा, शिक्षक कर्मचारीको तलब तथा अन्य खर्चको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको थियो।
अब कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गरिने प्याब्सनले जनाएको छ। प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले लामो समयपछि आफूहरूको माग सुनेको भन्दै अब महामारीको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गरिने बताएका छन्।
कोरोना महामारीको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा भौतिक रूपमा विद्यालय खुले पनि अधिकांश ठाउँमा भने खुल्न सकेका छैनन्।
हाम्रो आपत्ति छ स: अभिभावक संघ
सीसीएमसीको उक्त निर्णयमा भने अभिभावकहरूले विरोध जनाएका छन्। अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले सरकारले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि आफूहरू बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने मनसायमा रहेको बताए।
“दश महिना त बन्द भइसक्यो। अब माघ महिनामा विद्यालय खोलेर के नै हुन्छ ररु अहिलेको वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार नै पठनपाठन गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष पुरीले भने।
सरकारले त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेकोमा समेत उनको आपत्ति छ। सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन खोजेको उनको भनाइ छ।
“महामारी बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्‍यो। तर, त्यसको निगरानी गर्ने अधिकार भने स्थानीय तहलाई दियो,” उनले भने, “यस्तो गर्नुको कारण यदि भोलि समस्या आयो भने स्थानीय तहकै टाउँको भार थुपार्न यस्तो गरिएको हो।”
शिक्षा मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पुर्‍याएर विद्यालय खोल्न सकिने जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने अन्य क्षेत्र पनि खुलिसकेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न सकिने जानकारी दिए।
त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको भन्दै खोल्ने र संक्रमित देखिएको खण्डमा बन्द गरिने उनको भनाइ छ।
“अन्य क्षेत्र पनि खुलिसकेका छन्। विद्यालय क्षेत्र बन्द हुँदा बालबालिकामा समेत समस्या देखिन थालेको छ,” उनले भने, “अब विद्यालय खोल्छौँ र कोरोना संक्रमित भएको खण्डमा पुनः बन्द गर्छौँ। यही प्रक्रियामार्फत् अगाडि बढ्नुपर्छ।”